Bosco Fiorito agritourism indawo yokuhlala
Ifama sinombuki zindwendwe onguFranca
Indawo yokuhlala ikwindlu yasefama ukusuka kwi-1860, ejikelezwe yindalo, ejikelezwe lihlathi elihle kunye namasimi. Ekutshoneni kwelanga okanye ngofifi, ungadibana neentsapho zamaxhama ezize kutya isidlo sakusasa kunye nemifuno evela egadini, okanye umvundla, isiqongqothwane ....
Indawo yokuhlala ibekwe kwindawo ezolileyo, intywiliselwe kwindalo yaseMuggia yasemaphandleni, i-50m ukusuka elwandle ekupheleni kwe-Farnei wood.Isakhiwo yindlu yasefama eqala ngo-1860, enye yembalwa eseleyo kuloo ndawo, kunye yelitye lentlabathi amaziko. ezi ngaphakathi, imigangatho kunye ngezinyuko yeplanga ngabo yokuqala ka time.It iquka lokulala kabini, enye igumbi lokuhlambela yabucala Ifunyanwa kwindawo ezolileyo, oluhlaza, ifanele kokuchitha lweholide kude kwizithuthi kwaye izingqisho ukudla emzini '.
Umnyango wendlu ozimeleyo kuyo yonke indlu
Ndifumaneka kusasa nasemva kwemini
Kuyinto indawo ezolileyo, emaphandleni, kunye nokwenzeka yokwenza Iihambo ezintle ndawo, yaye abathandi ibhayisekile kwi 50m kwi La Parenzana umjikelo umendo luqala, xa 10km Trieste, isixeko central European, kunye nezakhiwo zawo kunye odumileyo PiazzaUnita ', sikufutshane neslovenia, edume ngeekhasino zayo kunye neespa.
Indawo yokuhlala ikufuphi nesikhululo sebhasi esiya kukusa eMuggia, ukuyonwabela indawo yayo yembali ye-Istria, okanye ukuya eTrieste, isixeko esikuMbindi Yurophu, esityebileyo kwinkcubeko.Ngaphezu koko, ukusuka eMuggia unokuthatha isikhephe ukuya eTrieste.
Indawo ezolileyo kwindawo eluhlaza, kufuphi nolwandle kunye nepaki enhle "Il Parco di Rio Ospo", isiqalo sendlela yomjikelezo "La Parenzana", kunye nohambo oluya kufuphi neSlovenia okanye eCroatia.
Ndiyafumaneka kwiindwendwe kulo naluphi na ulwazi